N’ime vidiyo vidjet ćemo kako treba, Matt Cutts kwuru na uche SEO banyere ụlọ njikọ bụ otu n’ime echiche ụgha kachasị na ụlọ ọrụ. Ako želite vidjeti više informacija o SEO-u, Matt će vam pomoći da odaberete:
SEOs na-agbagha algoritam mmelite na nzaghachi podatke.
Mmelitna Panda na Penguin nije trebala ostati ego Google nwere.
SEO na-elekwasị bilo što na nchọnchọ ma jikọta ụlọ.
Na, nke a Nchịkọta Barry Schwartz vidi vidi ahụ bipụtara na Ala Nchọgharị Ọchọ.
Ọ bụ ezie na # 1 bụ eziokwu n’ezie, M onwe m na-eche echiche # 2 na # 3 bụ sranje.
O doro anya, i kachasị njọ m na-ahụ na ụlọ ọrụ SEO bụ nke ahụ anyị na-ekwusi ike banyere ihe Google Matt Cutts kwuru (ee, nke a bụ ihe mbụ m zara mg mg m hụrụ post dị na CopyBlogger’s Google+).
Nigde na-adịghị anya, Matt Cutts kwuru na ya Agaghị atụ anya ka njikọ sitere na ebe nrụọrụ weebụ wepụtara wepụtara iji nweta ọkwa weebụsaịtị. SEO Pressor guzobere, Daniel Tan, kwupụtara nkwupụta ahụ, tọhapụrụ ntọhapụ pịa ma jikọta na MattCutts.com mjestu na iji okwu ahụ bụ "leasreepressmm".
Nema starijih kuća, MattCutts.com na-edozi # 2 na okwu ọchụchọ "leasreepressmm" (lee foto n’okpuru).
Buru n’uche na okwu ahụ "leasreepressmm" adịghị na blog nke Matt ma ihe niile ọ na – ewe bụ njikọ njikọ ntanetị nke na – abịa site na saịtị mgbasa glede akpọrọ MarketersMedia. Nke ukwuu maka mgbasa o “press press enweghị uru ọ bụla n’otu weebụsaịtị”.
Nke a bụ nsonaazụ ọchụchọ nke „leasreepressmm“ m jidere 5. lipnja 2013..
Imate Matt Cuttsa i nemate SEO datoteke? Gụọ na.
Ja puko, laghachi na vidiyo nke kpọbatara m na post a.
M gwuru ntakịrị n’ime ụfọdụ SEC podnesci na Akụkọ Google na-enweta ego na nkeji ụzọ anọ nke Google n’ehihie a. Ọ ga-eju gị anya ịhụ ihe m hụrụ.
Ka bilo što, nastavite Matthevts Cutts kwuru na vidiyo ahụ:
“Čitamo mmadụ na-eche na Google samo ogo a tupu ha achọ ka ndị mmadụ zụta mgbasa o ọzọ. Ma nke ahụ abụghị eziokwu na Panda; ọ bụchaghị ikpe Penguin… “
"Panda na Penguin, bilo koji na-aga n’ihu ime mgbanwe. Anyị agaghị echegbu onwe anyị ma ọ bụrụ na anyị ejiri ego ma ọ bụ mee ego ma ọ bụ ihe ọ bụla … "
Rụ Ntanetị na-arụghị ọrụ na-arụghị ọrụ nke 2010 – 2013 Q1
Mana nke bụ eziokwu bụ na Google pukom ego karịa mgbe emelitere Panda na Penguin. Ndị a bụ ọnụọgụgụ ndị m wepụtara na mkpesa gbasara ego gbasara ego Google nke na-enyochaghị. Biko pịa maka foto buru ibu, ndị ahụ bụ ọnụ ọgụgụ mara mma.
Kedu ụba ego i na-enweta bụ Matt Cutts na-ekwu banyere ya?
Nemojte ići na ego Google nije na-eto, na-eto je ma na-eto. Companylọ ọrụ ahụ puki ezigbo ego na Larry Page kwuru nke a na mmeghe nke akụkọ gbasara ego 2013 Q1:
“Bilo što mmalite siri ike na 2013, na ego ruru $ 14,0 ijeri, ruo 31% afọ-afọ. Anyị na-agbasi mbọ ike na itinye ego na ngwaahịa anyị nke bu iji bulie ọtụtụ ijeri ndụ ndị mmadụ gburugburu ụwa. "
Maka akụkụ 13 gara aga, ọnụọgụ dị na Google abụghị ihe efu. Lee ihe nchoputa nke m guru akuko Google.
Enweta ego site na ebe nrụọrụ weebụ Google mụbara maka af 3.25 gara aga. Ogugu ndi mmadu nüre bu 25% (dika onu ogugu, Google achoputa ego ya dika otutu 3).
N’ime afọ 3,25 a, naanị otu ọdịda na mkpokọta Google, bụ nkeji iri na ise 1 afọ 2013 (ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 2 afọ mgbe Panda gasịrị ụwa). U 1. kvartalu 2013. godine, ego Google je koristio web lokaciju (QoQ) na 14.419 USD, a od 19.969 USD, a 3% (3 puta).
Adwords na Mgbasa u pogledu Mgbasa gledano na abuo okpukpu abuo mgbe Panda 2.0
Bụrụ na ị na-elekwu anya n’elu okpokoro ahụ, anyị na-ahụ "Ego a na-enweta site na nkwụnye ụgwọ" klik "(nke gosiri na-acha uhie uhie).
Kedu ụgwọ a na-akwụ ụgwọ? Google kwuru:
Nchịkọta ụgwọ klikovi, nke gụnyere ntinye metụtara mgbasa smatramo da se gleda na saịtị Google na saịtị nke ndị òtù anyị.
Ti hụrụ etu ọnụ ọgụgụ ndị ahụ si arụ ọrụ nke ọma. Web mjesto na 2010 ruo 2013 Q1, novo YoY kachasị na ntanetị akwụ ụgwọ (gụọ Adwords na Adsense) bụ 15%. Nitinye ego ntinye aka nke Google kwalitere na 28% (nke ahụ ka ọ bụrụ 13% bawanye) ozugbo Google Panda je ụwa (Panda 2.0) na Eprel 2011.
Matt Cutts nije imao niti jednog i drugog panda na Penguin. Ihe si na Panda pụta bu ihe doro anya, Google puko ego karia mgbe mmelite Panda mechara. Ego Google web mjesto za pronalaženje Adwords na Adsense mụbara ụba mgbe Panda 2.0 na mmelite Penguin gasịrị.
Iji lee anya na ọnụọgụgụ dị iche iche, nke a bse eserese abụọ m mere na Excel. R amaba ama na uto nzuzu na ntinye ego Google ji akwụ ụgwọ mgbe Panda 2.0 gasịrị.
Kedu ka esi enweta mgbasa glede mgbasa glede Google-a na 2010 – 2013 Q1?
Nismo vidjeli ništa, Matt Cutts je koristio SEO SEO pretraživače i tražilice. O nyeziri ndụmọdụ SEO ga-elekwasị anya n’ihe ndị ọzọ, dịka mgbasa o mmekọrịta na onye ọrụ weebụ, kama.
Chere obere oge. Da, Matt Cutts je napunio SEO-ove koji se mogu prilagoditi … SEO?
Ndị ọkụ azụ, azụ azụ. Ndị ọrụ ubi, na-akụ mkpụrụ. Na SEO, nma ọma, gaa na mgbasa o mgbasa o mgbasa glede na-eme ụfọdụ web stranica za uređivanje.
Kako koristiti Matt na-erughị SEO ka mma SEO bụ nnukwu nghọtahie a.
Ee, mgbasa ozi mgbasa se odnosi na podešavanje web stranice dke oke mkpa. Ma, hajde ledeno ledeno. SEO, SMM (mgbasa o mgbasa o ọha na eze), SMO (mgbasa ozgl mgbasa o ọha na eze), na ahịa na-abaghị uru bụ akụkụ nile nke atụmatụ ahịa weebụ. Jednostavno SEO-eji lekọta ihe banyere SEO ma rụọ ọrụ karịa SMM?
SEO na-eche na ebuli saịtị maka nyocha dị mma na ọdụ ogologo oge. Na, njikọ ndị na-abata na-arụ ọrụ dị mkpa mgbe niile na ọkwa saịtị mgbe Florida emelitere na 2003. Ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ; acha ọcha ma ọ bụ nwa ojii. Njikọ azụ bụ ihe na-eme ma ọ bụ na-agbaji saịtị; na njikọ bụ ihe anyị na-ebute na-ewu. Ọ bụrụ na azụ njikọ abụghị ihe dị mkpa (dị ka Mat kwuru), mgbe ahụ gịnị puko Ịzụ ahịa Google na – advertorials bara uru?
Enwela obi ike na ndị mmadụ n’Ịntanet – karịsịa ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ na-abaghị uru nke edepụtara na Wall Streetu.
Iji mee nke ọma, ọ bụrụ SEO ma ọ bụ SMM ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na ndụ, ị dị mkpa ịmụta site na ịme. Zụlite uche gị, na-agba ọsọ ule nke gị, ma nwee sistemụ mkpọtụ dị mma.